Cashier | ﻿
19.2.2019, Full time ,
•	စကားပြောယဉ်ကျေးချိုသာသူဖြစ်ပြီးအများနှင့် ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
•	ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
•	Computer (MS Office) ကောင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ MIT Software အသုံးပြုဖူးသူ ဦးစားပေးမည်။
•	LCCI Level-I,II တက်မြောက်ထားသူဖြစ်ရမည်။
Work location No. (83), U Myae Street, Industrial (4), Shwe Pyi Thar Tsp.
289 Days, Full time ,
•	စကားပြောယဉ်ကျေးချိုသာသူဖြစ်ပြီးအများနှင့် ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
301 Days, Full time ,
307 Days, Full time ,
•	Job title: Assistant Chief Accountant (3 Posts) •	Gender: Female •	Business Unit: Finance and Account Department •	Report to: Finance and Account Manager •	Job Venue: Yangon •	Educational Qualification: B. Com or Any Graduate + LCCI Level III or ACCA Part II •	Working Experience: At least3years’ experience in management position at related field •	Skills: Microsoft office, Accounting software, good in financial monitoring, budgetary •	systems and controls, Can speak and write in English, Internet & ema ...
331 Days, Full time ,
337 Days, Full time ,
•	စိုက်ကွင်း၏ လုံခြုံရေးတာဝန်များအား နေ့/ည ထမ်းဆောင်ရမည် •	တာဝန်ချထားဇယားအတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည် ညလုံခြုံရေးတာဝန်ချထားစဉ် •	လှည့်ကင်းထမ်းဆောင်နိုင်ရမည် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ •	ညွှန်ကြားချက်များ � ...
399 Days, Full time ,
Junior Staff(HR & Admin) •	Must be problem solving skill
440 Days, Full time ,
Cashier Accountancy Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Mudon Maung Maung Group of Companies Accountancy Jobs Accountancy Jobs Cashier Jobs in Myanmar, jobs in Yangon